အစားအသောက်မာယာ သဲကိုးဖြာ | yathar Magazine
အောက်တိုဘာ 23, 2020
သင်က အစားအသောက်တွေကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ foodie တစ်ယောက်လား?
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အခုစားနေတဲ့ အစားအသောက်တွေအကြောင်းရော ဘယ်လောက်ထိသိလဲ။ အခုပြောပြသွားမယ့် အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာအချက်တွေထဲက ဘယ်နှစ်ချက်လောက်ကို သင်သိမလဲဆိုတာ စမ်းကြည့်ကြမလား။
၁. စတော်ဘယ်ရီနဲ့ ရတ်စ်ဘယ်ရီတွေဟာ ဘယ်ရီမျိုးစိတ်တွေ မဟုတ်ကြပါဘူး
ဟုတ်ပါတယ် စတော်ဘယ်ရီနဲ့ ရတ်စ်ဘယ်ရီတွေက ဘယ်ရီမျိုးစိတ်မဟုတ်ကြပါဘူး။ ဘယ်ရီမျိုးစိတ်တွေဆိုတာ အပွင့်တစ်ပွင့်တည်းမှာ အစေ့အိမ်တစ်ခုတည်းပါပြီးတော့ သီးလာတဲ့အသီးမှာမှ အစေ့တွေအမြောက်အများပါပါတယ်။ စတော်ဘယ်ရီနဲ့ ရတ်စ်ဘယ်ရီအပင်တွေမှာ ပန်းတစ်ပွင့်မှာ အစေ့အိမ် တစ်ခုထက်ပိုပါတာကြောင့် ဘယ်ရီမျိုးစိတ်လို့ မသတ်မှတ်ကြပါဘူး။
၂. ငှက်ပျောသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ သလဲသီးနဲ့ ကီဝီသီးတွေက ဘယ်ရီသီးမျိုးနွယ်ဝင်တွေပါတဲ့
အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့သလိုမျိုး အပွင့်တစ်ပွင့်တည်းမှာ အစေ့အိမ်တစ်ခုတည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီအသီးတွေက ဘယ်ရီသီးမျိုးစိတ်ထဲ အကြုံးဝင်ပါတယ်။ စတော်ဘယ်ရီက ဘယ်ရီသီးမဟုတ်ဘဲ ငှက်ပျောသီးက ဘယ်ရီသီးဖြစ်နေမယ်လို့ ဘယ်သူထင်ကြမှာလဲနော်။
၃. Hawaiian Pizza က အီတလီကမဟုတ်သလို ဟာဝိုင်အီကျွန်းကလည်း မဟုတ်ပါဘူး
ပီဇာမြင်တိုင်း အီတလီကလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ Hawaiian ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြောင့် ဟာဝိုင်အီကျွန်းကလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ Hawaiian Pizza ကို စပြီးတီထွင်ခဲ့တာကတော့ ကနေဒါနိုင်ငံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပီဇာမှာပါတဲ့ နာနတ်သီးလေးတွေကို ကြိုက်တဲ့သူလည်း ရှိသလို မကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းများတာကြောင့် ဒီပီဇာက ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ နာမည်ကြီးပါတယ်။
၄. Figs လို့ခေါ်တဲ့ သဖန်းသီးတွေထဲမှာ နကျယ်ကောင်တွေ ပါပါတယ်တဲ့
သဖန်းသီးတွေကို နကျယ်ကောင်တွေက ဝတ်မှုန်ကူးကြပါတယ်။ ဒီလိုဝတ်မှုန်ကူးတဲ့အချိန်မှာ တောင်ပံကျိုးသွားတဲ့ နကျယ်ကောင်တွေက ဆက်မပျံနိုင်တော့ဘဲ သဖန်းသီးထဲမှာပဲ သေဆုံးသွားရပါတော့တယ်။ သဖန်းသီးထဲက အန်ဇိုင်းဓာတ်တစ်မျိုးက နကျယ်ကောင်တွေကို သဖန်းသီးထဲမှာတင် အစာချက်ပြီး ပြိုကွဲပျက်စီးစေပါတယ်။
၅. အာလူးမှာ ရေဓာတ် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပါဝင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့ အာလူးမှာ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင် ရေဓာတ် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်နေပါတယ်။ သခွားသီးမှာကတော့ ရေဓာတ် ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပါဝင်ပါတယ်။ ပိုပြီးထူးဆန်းတာကတော့ အာလူးထဲမှာ ပါတဲ့‌ရေနဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးက ဝိုင်ဖိုင်လိုင်းတွေကို ဖမ်းယူပြီး ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် အာလူး router အနေနဲ့ သုံးလို့ရပါတယ်။
၆. အက်စ်စကီမိုးလူမျိုးတွေနဲ့ ရေခဲသေတ္တာ
ရေခဲသေတ္တာကို အသားငါးတွေ အေးခဲမသွားအောင် ကျွန်‌တော်တို့နဲ့ ပြောင်းပြန်သုံးကြတဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အက်စ်စကီမိုးလူမျိုးတွေ နေထိုင်ကြတဲ့ အာတိတ်ရေခဲပြင်ဒေသမှာ ရာသီဥတု‌အေးလွန်းတာကြောင့် အသားငါးတွေအေးခဲ မသွားအောင် ရေခဲသေတ္တာတွေထဲမှာ ထည့်သိမ်းကြပါတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့ ပြောင်းပြန်ပေါ့။
၇. French fries က တကယ်တော့ ပြင်သစ်အစားအစာမဟုတ်ပါဘူး
French fries ကို စတီထွင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကတော့ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံပါ။ ပြင်သစ်တွေ စပြီးတီထွင်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။
၈. ပျားရည်က တကယ်တော့ ပျားတွေရဲ့ အန်ဖတ်တွေပါ
ပျားတွေက ပန်းဝတ်ရည်တွေကို စုပ်ယူပြီးနောက် အစာအိမ်ထဲမှာ သိမ်းလာကြပါတယ်။ ပျားအုံကို ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှ ပျားရည်တွေအဖြစ် ပြန်အန်ချပါတယ်။ တကယ်တော့ ပျားရည်ဆိုတာ ပျားတွေရဲ့ အန်ဖတ်ပါ။
၉. မြေပြင်ပေါ်မှာ စားရတဲ့အစားအသောက်က လေယာဉ်ပေါ်ကအစားအသောက်ထက် ပိုအရသာရှိပါတယ်
ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်က လေယာဉ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာ လေဖိအားကို ခံစားရပါတယ်။ အဲဒီလေဖိအားက အနံ့နဲ့အရသာခံမှုကို မြေပြင်ပေါ်မှာထက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းစေပါတယ်။
၁၀. ကမ္ဘာပေါ်က ပန်းသီးမျိုးစိတ်ပေါင်းအကုန်လုံးကို မြည်းစမ်းဖို့ဆိုရင် အနှစ် ၂၀ လောက် အချိန်ယူရနိုင်ပါတယ်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပန်းသီးမျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ သင်တစ်နေ့ကို ပန်းသီးတစ်လုံး မြည်းစမ်းကြည့်သွားမယ်ဆိုရင် အနှစ် ၂၀ လောက် အချိန်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆိပ်ရှိတဲ့ ပန်းသီးမျိုးကို စားမိမယ်ဆိုရင်တော့ အနှစ် ၂၀ ထက် လျော့ချင်လည်း လျော့သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ် စားသုံးနေကြတဲ့ အစားအသောက်တွေရဲ့ ထူးခြားမှုတွေကို သိရှိသွားပြီဆိုတော့ ဗဟုသုတတစ်ခုခုရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ပန်းသီးတွေတိုင်းကို မြည်းကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ သင့်ရဲ့ အန္တရာယ်များတဲ့အတွေးတော့ ပျောက်သွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။
yathar, Marketing Dep. / Digital Marketing Executive.
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မစားမဖြစ်နံပါတ်တစ် Street Food များ
Cola သံုးၿပီး ဘာေတြခ်က္မလဲ?